जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको लागि सहज र सजिलो तरीका, सिमकार्डको कम लागत | जीवन | जापान गाइड र सूचना |アクセス日本留学
अद्यावधिक | अप्रिल ०१, २०२०
* यस लेखको सक्कली अंग्रेजी अंग्रेजीमा लेखिएको छ। जापानमा सिमकार्ड पठाउनु भनेको जटिल र जटिल हो। यहाँ जापानमा विदेशीहरूबीच जेपी स्मार्ट सिम सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प हो भन्ने तीन कारणहरू छन्।
IssuingaSim card in Japan is complicated and complicated
Reasons कारणहरू जेपी स्मार्ट सिम जापानमा एक्सप्याटहरू बीच सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प हो
के तपाईंले पहिले नै अर्को प्रदायक छान्नुभएको छ? कुनै समस्या छैन!
MNP विशेष प्रस्ताव के हो? मासिक शुल्क सस्तो हुनेछ!
जापानमा सिम कार्ड जारी गर्नु जटिल र जटिल छ
तपाईंलाई थाहा छ, जापान माउन्ट फुजी, शिन्टो मन्दिरहरू, चिया समारोह, किमोनो, एनीमे, र यस्तै अन्यका लागि प्रख्यात देश हो। यस बाहेक, यो धेरै जटिल र कठोर प्रक्रियाहरूका साथ रूढीवादी देश पनि हो। जापानमा बस्ने र काम गर्ने सिम कार्डहरू दर्ता गर्न कठिनाई भएको छ।
फोन नम्बर हुनु भनेको रेजिष्ट्रेसनहरूको लागि बस्ने ठाउँ भाँडामा लिन, बैंक खाता खोल्न, जागिरको लागि आवेदन दिन, वा यहाँ लाइनका लागि साइन अप गर्न जरुरी कुरा हो - जुन देशको सबैभन्दा लोकप्रिय च्याट गर्ने अनुप्रयोग हो। जहाँसम्म, केवल एक केही वर्ष पहिले, मोबाइल संचार प्रदायकहरूको लागि केवल तीन विकल्पहरू थिए। र ती सबैलाई अझै २ बर्षको अवधिसँग बाध्यकारी सम्झौता आवश्यक पर्दछ। यसको मतलब यदि तपाईं यी कम्पनीहरूबाट एक सिमकार्ड खरीद गर्नुहुन्छ भने, र पहिले यसलाई रद्द गर्न चाहनुहुन्छ भने। दुई बर्ष बितिसकेको छ, तपाईंले सम्झौता भ breaking्ग गर्नका लागि शुल्क तिर्नु पर्नेछ। साथै, यदि तपाईं सिम कार्ड समावेश भएको एक किस्तहरू फोन सेट प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले सम्झौता रद्द गर्दा बाँकी सबै रकम तिर्नुपर्नेछ। यो मोडेलमा निर्भर गर्दै तपाईको फोन र २ बर्षको सम्झौताको अन्त्य सम्म तपाईले कति समय छोड्नुभयो, त्यो रकम प्राप्त गर्न नराम्रो आश्चर्य हुन सक्छ जब तपाईले जापान छोड्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै, २ बर्षको अनुबन्ध प्राय: जसलाई केवल उनीहरुको लागि उपलब्ध हुन्छ। कम्तिमा २-वर्ष रेसिडेन्सी अनुमति। यदि तपाइँको अनुमति छ भने आयन दुई बर्ष भन्दा कमको हो, त्यसपछि केहि कम्पनीहरूले तपाईंलाई ग्राहकको रूपमा लिन स्वीकार गर्दैनन्।
जापानमा विदेशी नम्बरका मानिसहरुका लागि मोबाईल नम्बर प्राप्त गर्न कत्ति गाह्रो छ भनेर जान्दै, DX HUB - एक विदेश मैत्री सेवा प्रदायकले लामो समय अवधिमा करार नचाहन वा गर्न नसक्नेहरुको लागी एक सेवा डिजाइन गरीएको छ: जेपी स्मार्ट सिम ।
Reasons reasons कारण किन JP स्मार्ट सिम जापानको एक्सप्याट बीचमा सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प हो
जेपी स्मार्ट सिमको एक सरलीकृत र कुशल डिजाइन छ, जापानमा बस्ने जो कोहीलाई उत्साहजनक समर्थन। यसको सुरक्षित सम्झौता, भुक्तानी विधि र एक सम्झौता रद्द गर्न आवश्यक समयको सीमा छैन धन्यवाद छ, धेरै एक्स्पेट्स र दीर्घ-कालिक आगन्तुकहरूले यो सेवा प्रयोग गरेका छन्।
१- एक सम्झौता दर्ता गर्न सजिलो
तपाईंले आफ्नै जेपी स्मार्ट सिम प्राप्त गर्न केवल अनलाइन आवेदन गर्न आवश्यक छ! स्टोरमा बसेर घण्टा खर्च गर्नु पर्दैन र धेरै कागजातहरू फाइल गर्नु पर्दैन, तपाईं छिट्टै आफ्नो आराम कोठामा पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइट अ English्ग्रेजी, भियतनामी, क्यान्टोनिज, मन्डारिनमा उपलब्ध छ। , र जापानीज। ग्राहक समर्थन पनि यी भाषाहरूमा उपलब्ध छ।
लागू गर्नको लागि, तपाइँ सिधा JP स्मार्ट सिम होमपेजमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, सेवालाई छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ, "अब लागू गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, र अनलाइन आवेदन फारम पृष्ठमा फर्वार्ड गर्नुहोस्।
तपाईं आवश्यक व्यक्तिगत जानकारीको साथ आवेदन फारम भर्नुहुनेछ, र तपाईंको परिचय सेवामा निर्भर भई आवश्यक परिचय कागजात सबमिट गर्नुहोस्। जस्तै JP स्मार्ट डाटाको लागि पासपोर्ट होल्डर पृष्ठको पूर्ण-रंग क्याप्चर वा तपाईंको निवास कार्डको दुई साइड-क्याप्चरहरू। JP स्मार्ट कलको लागि। र ती सबै हो!
एक निवास कार्ड बिना पर्यटकहरु (यात्रा को लागी दीर्घकालीन भ्रमण गर्नेहरु) "JP स्मार्ट डाटा" सिम कार्ड सेवा को लागी आवेदन गर्न सक्दछ। केवल आवश्यक कागजात तपाईको राहदानी हो। यद्यपि तपाईको जापानमा निश्चित ठेगाना छैन भने पनि तपाई गर्न सक्नुहुनेछ। जापान भित्र जहाँ पनि तपाइँ अस्थायी रूपमा बस्नुहुनेछ जहाँसुकै सिमकार्ड डेलिभर गर्न आवेदन दिनुहोस्। जब तपाइँको सिमकार्ड आइपुग्छ त्यहाँ अवश्य हुनुहोस्!
फोन आफैंको लागि (उपकरण), जेपी मोबाइल सिम धेरै सिम-मुक्त उपकरणहरूसँग उपयुक्त छ जुन4जी समर्थन गर्दछ, तपाईको देशबाट ल्याइएका पनि।
तिनीहरूको सिम कार्ड एक inin1 प्रकारको हो। धेरै आकारमा काटिएको हुन्छ, त्यसैले यसले चिन्तित हुनु पर्दैन कि यो तपाईंको उपकरणसँग मिल्छ कि भनेर।
२- बैंक खाता वा क्रेडिट कार्ड हुनु आवश्यक छैन
यदि तपाईं अरू ठूला क्यारियरहरूमा नम्बर वा मोबाईल प्राप्त गर्न कोशिस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई स्वचालित भुक्तानी फिर्ता लिनको लागि दर्ता गर्नको लागि क्रेडिट कार्ड वा बैंक जानकारी चाहिन्छ। र बैंक खाता खोल्दा तपाईले फोन नम्बर पनि पाउनुपर्नेछ। "कुखुरा वा अण्डा" दुविधा एकदम निराश र तनावपूर्ण छ। साथै, यदि तपाईंसँग निवास कार्ड छैन भने तपाईंसँग बैंक खाता हुन सक्दैन, त्यसैले लामो अवधिको पर्यटन आगन्तुक जे भए पनि योग्य हुँदैनन्।
जेपी स्मार्ट सिमको साथ, तपाईले बैंक खाता वा क्रेडिट कार्डको आवश्यकता बिना नै फोन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जापानका अधिक सुविधाजनक स्टोरहरूमा नगद भुक्तानी यो सेवाको आकर्षणको विशेषता हो।
यदि तपाइँ तपाइँको भुक्तानी विधिलाई "सुविधा स्टोरहरू" को रूपमा चयन गर्नुहुन्छ भने, जेपी स्मार्ट सिमले तपाइँको इनभ्वाइसको विवरणहरूको साथ प्रत्येक महिनाको २ on तारिखमा तपाइँलाई एक ई-मेल पठाउँनेछ। अधिक, भुक्तानी अवधि भुक्तान जारी हुने मिति देखि लचिलो छ त्यो महिनाको अन्तिम दिन। त्यसोभए तपाईं कुनै पनि समयमा यो पहल गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँसुकै लामो समय सम्म यो मिति भन्दा अघि नै।
साथै, तपाईं "JP स्मार्ट सिम" मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गरेर आफ्नो फोन बिलहरू ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं आफ्नो दर्ता गरिएको खातासँग पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो अब App Store (iOS उपकरणको लागि) र Play Store (Android उपकरणको लागि) मा उपलब्ध छ।
केवल सावधान रहनुहोस्: तपाईंले त्यो महिना समाप्त हुनु अघि मासिक भुक्तानी पूरा गर्नुपर्नेछ। अन्य, सेवा अस्थायी रूपमा अर्को महिनाको पहिलो दिनमा रोकिनेछ।
- कुनै अनुबन्ध रद्द शुल्क छैन
जेपी स्मार्ट सिमको साथ अन्य कम्पनीहरूबाट फरक, तपाईं कुनै पनि समय रद्द रद्द शुल्क बिना सम्झौताको अन्त्य अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ! जेपी स्मार्ट सिम वेबसाइटमा तपाईंको "मेरो पृष्ठ" खाता मार्फत अनुरोध पठाउनु अघि उपयोग अवधि पुष्टि गर्न नबिर्सनुहोस्।
तपाईंको सम्झौता रद्द गरेपछि, त्यहाँ सिम कार्ड फर्काउन आवश्यक छैन: केवल यसलाई सहि तरिकाले निकाल्नुहोस् (तपाईंको शहरको वेबसाइटमा जाँच गर्नुहोस्)।
यदि तपाईं आफ्नो फोन नम्बर रिजर्भ गर्न चाहानुहुन्छ किनकि यो धेरै दर्ता कागजातहरूसँग सम्बन्धित छ, तपाईं एक "निष्क्रिय सेवा" अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। यो वैकल्पिक सेवाको साथ तपाईले आफ्नो सिम कार्डलाई फिर्ताको अगाडि सक्रिय राख्न केवल y०० येन / महिना तिर्नु पर्छ, प्रत्येक महिना पूर्ण भुक्तानको सट्टा।
--कुनै डिलिभरी शुल्क छैन
त्यहाँ अधिक निःशुल्क छ! वितरण नि: शुल्क हो। सिमकार्ड खरीद गर्न पूरा गरे पछि तपाईंको घरको ढोका बिल्कुल ० येनको लागि डेलिभर हुनेछ! जापानमा लामो यात्रा पछि आराम गर्न घर र आराम गर्ने ठूलो अवसर ????
। "तपाईं अहिले किन मलाई यो भनेको छ? मैले पहिले नै अर्को प्रदायक छान्छु!" - कुनै समस्या छैन! क्यारियरहरू परिवर्तन गर्नुहोस् र आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्।
जहाँसम्म तपाईले अर्को क्यारियरको साथ फोन नम्बर लिने निर्णय गर्नु भयो भने पनि जेपी स्मार्टमा परिवर्तन गर्नु सोच्न लायकको विकल्प हो।
पहिले, यदि तपाईंले भर्खरै आफ्नो करारमा हस्ताक्षर गर्नुभयो भने, तपाईंको क्यारियरको साथ जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईं नि: शुल्क रद्द गर्न सक्नुहुन्छ भने केही प्रदायकहरूले तपाईंलाई तपाईंको सम्झौताको पहिलो दिनदेखि आठ दिनमा यो अनुमति दिनेछ।
दोस्रो, यदि तपाई जापानमा दुई बर्ष भन्दा कम समयमै बस्दै हुनुहुन्छ र जे भए पनि रद्द गर्ने शुल्कको ख्याल राख्नुहुन्न, तपाईको हालको सम्झौता अहिले नै समाप्त हुन्छ र जेपी स्मार्ट सिममा स्थानान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ। यद्यपि तपाइँ रद्द गर्ने शुल्कमा बचत गर्नुहुने छैन। , तपाइँ तपाइँको मासिक बिल प्रति वर्ष २०,००० सम्म बचाउनुहुनेछ।
M MNP विशेष प्रस्ताव के हो? मासिक शुल्क सस्तो हुनेछ!
यो धेरै युवाहरूलाई अनौंठो लाग्न सक्छ, तर विगतमा (अझ विशेष गरी २०० 2006 सम्म) तपाईको फोन नम्बर परिवर्तन नगरी क्यारियरहरू परिवर्तन गर्न सम्भव थिएन। अक्टुबर २००, देखि, जापानका कुनै पनि वाहकले उनीहरूका ग्राहकहरूलाई सक्षम गर्नुपर्नेछ। MNP (मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी), जसको मतलब तपाई आफ्नो फोन नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले वाहकहरू परिवर्तन गर्नुभयो भने पनि।
जेपी स्मार्टले MNP गर्न चाहनेहरूको लागि विशेष प्रस्ताव तयार गरेको छ: १￥, 60 to० सम्म बचाउनुहोस् यदि तपाईं जेपी स्मार्ट सिममा आफ्नो नम्बर पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने!
जेपी स्मार्ट सिममा तपाईंको फोन नम्बर स्थानान्तरण गर्दा, तपाईंले छुट पाउनुहुनेछ: नि: शुल्क अनुबन्ध प्रशासन शुल्क, पहिलो पहिलो करार-नि: शुल्क आधारभूत शुल्क, र दोस्रो र तेस्रो महिनाको आधारभूत मासिक शुल्कमा %०% छुट!
यस छुटले रद्द शुल्क पनि कभर गर्न सक्छ कि तपाईंले आफ्नो हालको योजना रद्द गर्न भुक्तान गर्नुपर्नेछ। विचार गर्नुहोस् यदि कुनै भविष्यको फोन बिल तपाईंले खर्च गर्नु भयो (जेपी स्मार्ट सिममा आवेदन गरे पछि) सस्तो छ, तपाईंको छनौट प्याकेजको आधारमा, त्यहाँ छैन ' t जेपी स्मार्ट सिममा तपाईंको नम्बर पोर्ट नगर्नका लागि कुनै पनि कारण!
पछिल्लो तर कम्तिमा होइन, जेपी स्मार्ट सिमले निश्चित समयमा उनीहरूको बिलहरू पूरा गर्नेहरूका लागि १ जीबी प्रति महिनाको विशेष बोनस पनि प्रदान गर्दछ।
अन्य क्यारियरहरूसँग तुलना गर्दै
जापानका प्रमुख क्यारियरहरू मध्ये केवल एक वा दुई योजनाहरू छनौट गर्न छन्। केहि प्याकेजमा डाटा सीमा छैन र छूट प्रदान गर्दछ यदि तपाईंको प्रयोग न्यूनतम रकम र परिवार प्याकेजको लागि केहि अन्य कटौतीमा पुगेमा, वा यदि तपाईंको घर इन्टरनेट प्रदायक उस्तै छ। तपाईको फोन। यी छुटहरू मध्ये धेरै जसो तपाईं यहाँ लामो समय सम्म रहिरहनु भएको छ भने, यदि तपाईं एक्लै बस्दै हुनुहुन्छ, वा सेयर हाउसमा बस्दै हुनुहुन्छ भने, जहाँ सम्झौताहरू तपाईंको नाममुनि छैनन्।
योजनाहरूका लागि अनुसन्धान गर्दै हामीले पत्ता लगायौं कि यदि तपाईं जेपी स्मार्ट सिममा २० जीबीको योजना लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने, मासिक बिल समान हुनेछ यदि तपाईं प्रमुख क्यारियर प्रयोग गर्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईं यो मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्दै। दुई बर्ष भन्दा कममा, रद्द शुल्क प्रमुख क्यारियरहरूको लागि लागु हुनेछ, जबकि त्यो जेपी स्मार्टमा हुने छैन। यदि २० जीबी वा अधिक योजनाहरू छनौट गरेमा।
ठूलो पार्न ट्याप गर्नुहोस्
जेपी स्मार्ट सिममा यदि तपाई हल्का योजना छनौट गर्नुहुन्छ भने तपाईले प्रमुख क्यारियरमा भुक्तानी गर्ने एचएलएफ भन्दा बढी बचत गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले रद्द गर्ने शुल्कको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्दैन!
लागू गर्न सजिलो, कुनै बाध्यकारी अनुबन्ध, लचिलो भुक्तान विधि, बहु-भाषिक समर्थनको साथ विदेशी-अनुकूल, जेपी स्मार्ट सिम तपाईंको लागि जापानमा उत्तम विकल्प हो।
हामीले जेपी स्मार्ट सिमले तपाईलाई सल्लाहकारको रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यावहारिक पक्ष र वित्तीय सुविधाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। जापानमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिकताहरू पार गर्न विदेशीहरू कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझेर; जेपी स्मार्ट सिमले गर्यो र अझै आविष्कार गर्दैछ। यसको सेवाहरू एक तरिकामा सकेसम्म कम तनाव कम गर्न हामी महसुस गर्दछौं।
जापानमा रहनु सामान्यतया ठूलो अनुभव हो। तर हामीले अनुभव गर्ने यी "सानो" तनावले अनुभवलाई बिगार्न योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।
तपाईको समय र मानसिक स्वास्थ्यको लागि यो सेवा छनौट गर्नुहोस् कि यो केवल कुशल मात्र नभएर सबैका लागि किफायती पनि हो, एकै समयमा यो विदेशीहरूलाई पनि भिन्न ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ, अमूल्य छ।
तपाईं जेपी स्मार्टमा कुनै पनि समय, अनलाइनमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, र यो सप्ताहन्तमा पनि डेलिभर हुन सक्छ। त्यहाँ उनीहरूको वेबसाइटमा विस्तृत प्रश्नोत्तर छन्, तर यदि तपाईंले त्यहाँ आफ्नो प्रश्नहरूको उत्तर फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तिनीहरूको ग्राहक समर्थनमा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। उनीहरूको फेसबुक फ्यानपेज वा उनीहरूको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत। तिनीहरू समर्थन गर्न खुशी छन् तपाईलाई जापानमा फोन नम्बरका लागि यो पहिलो पटक दर्ता होस् वा यदि तपाई अर्कै क्यारियरबाट आउदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सहयोग गर्न खुसी छन्।
के तपाईं पहिले नै विश्वस्त हुनुहुन्छ कि यो जापानमा सब भन्दा विदेशी मैत्री, उचित मोबाइल क्यारियर हो? तपाईको समयलाई अगाडि नहेर्नुहोस्, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् र तिनीहरूको वेबसाइटमा जानुहोस्!
JP स्मार्ट सिम